Xafiiska Warfaafinta Madaxtooyada Soomaaliya oo ciidsiiyay Agoontii ay ka tageen weriyayayaashi ku dhintay Muqdisho. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Xafiiska Warfaafinta Madaxtooyada Soomaaliya oo ciidsiiyay Agoontii ay ka tageen weriyayayaashi ku dhintay Muqdisho.
Xafiiska Warfaafinta Madaxtooyada Soomaaliya oo ciidsiiyay Agoontii ay ka tageen weriyayayaashi ku dhintay Muqdisho.
Ku dhawaad 100 caruur ah oo ay dhaleen in kabadan 27 weriye oo siyaabo kala duwan ugu dhintay Magaalada Muqdisho tan iyo sanadkii 2007 ayaa maanta loo qaybiyay lacag ciidsiin oo uu ugu talagalay xafiiska warfaafinta ee Madaxtooyada Soomaaliya.
C/risaaq Jaamac Cilmi Black oo ah madaxa xiriirka warbaahinta ee Madaxtooyada ayaa sheegay in Xafiiska warfaafintu uu diyaar u yahay in uu kaalin muuqata ka qaato daryeelka agoonta wariyaasha, sidoo kalana uu dhiirigalinayo qorshe kasta oo wax loogu qabanayo caruurtaas.
hinaca kale C/laahi Cusmaan Faarax oo ku hadlay magaca guddi wariyaal ah oo Xafiiska warfaafinta kala shaqeeyay raadinta iyo tirakoobka agoonta ayaa sheegay in wariyaasha Soomaaliyeed ay dhiiri-galin u tahay in garab istaag loo muujiyo carruurtii ay ka dhinteen saaxiibadooda shaqo, lana ciidsiiyo maadaama waalidiintoodu ay geeriyooday iyaga oo bulshada Soomaaliyeed u adeegaya.
Munaasabad loogu qaybinayay lacagta caruurta agoonta ah ayaa waxaa kazoo qaybgalay Madaxda Warbaahinta Muqdisho, weriyayaal iyo waalidiinta caruurta agoonta ah.